दोस्रो ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ काठमाडौँमा हुने « Dainiki
३१ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको प्रवेश मार्गका रुपमा स्थापित गराई साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दोस्रो ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट–२०१८’ आयोजना हुने भएको छ ।
५ फागुन, दोलखा । प्रहरीले हिउँमा अलपत्र परेका झण्डै ७०० पर्यटकको कालिञ्चोकबाट उद्धार गरेको छ
–जमुना शर्मा ५ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश
३ फागुन, काठमाडाैँ । हिमालमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि चीन सरकारले सगरमाथा आरोहण रोकेको छ । चिनियाँ
२९ माघ, काठमाडौँ । सन् २०१९ को जनवरी महीनामा ९१ हजार ७९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल
स्ववियु निर्वाचनको माग गर्दै अनेरास्ववियुले भोलि त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय घेराउ गर्ने
कांग्रेसले अख्तियारमा पठाएका घुस खाने पाठकलाई १२ वर्ष जेल र ७८ लाख जरिवाना !
नुवाकाेटकाे सुनखानी देखाएर मैले १४ करोड हिनामिना गरेको हुँः नेता थापा !
काठमाडाैँमा भूकम्पको धक्का
ससुराली जाँदा गगनले सम्झिए ‘बाख्रा’, स्थापितले बर्काैला नभेटेको ठाउँमा गगनले खोजे १४ करोड